Attention Vatengi: Retail Inowana Mamwe Ongororo kupfuura maresitorendi paYelp | Martech Zone
Unonzwa TripAdvisor, unofunga Hotels. Unonzwa Healthgrades, unofunga vanachiremba. Unonzwa Yelp, uye mikana yakanaka iwe yaunofunga Restaurants. Ndicho chikonzero nei zvichiuya sekushamisika kune vazhinji varidzi vemabhizinesi uye vashambadzi kuverenga Yelp's yake nhamba iyo inotaura kuti, pamamirioni zana nemakumi masere nemashanu ekuongorora kwevatengi Yelpers akasiya kubva kuvhurwa, 22% inoenderana nekutenga vs. 18% ine chekuita neresitorendi. Retail mukurumbira, saka, inoumba chikamu chakakura cheYelp zvemukati, zvichiratidza kumabhizinesi ezvidhina-uye-matope ayo anochengetedza hushamwari hweYelp kuvepo kwekutsvaga kwekutsvaga kwekuno.
Random chaiyo-nyika muenzaniso: tarisa Yelp's yepamusoro chinzvimbo chekuvandudza dzimba muzvitoro muSan Francisco Bay Area. Huwandu hwakawanda hwezviongorori zvakawanikwa nezvimwe zvitoro zvinoshamisa. Tinoona Discount Builders Supply (250), Lowe's Home Improvement (427), Cole Hardware (297) uye Cliff's Variety (461). Iko kusanganiswa kwemakuru makuru uye vatengesi vakazvimiririra vanojekesa zviyero zvekutarisa chero bhizimusi chero ripi zvaro ravangade kuwana, chero vaine mafungiro akanaka.
Asi heino kubata: Yelp's ongororo nhungamiro ndiwo mamwe akaomesesa muvatengi ongororo yenyika, ichinyatsorambidza makambani kubvunza zvakananga vatengi kuti vaongorore. Saka bhizinesi rekutengesa rinogona sei kukwikwidza muYelp uyezve richitevedzera gwara? Heano mazano mashanu ekukubatsira iwe kuita izvo chaizvo.
1. Dzivisa Kutambisa Zvinhu
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti kana bhizinesi rako rikasarudza kuregeredza nhungamiro dzeYelp uye wotanga kukumbira vatengi vese kuti vakuongorore paYelp, kudzoka kwako pane kudyara kwekuyedza kunogona kunge kusingakoshe. Kukumbira chero munhu kuti akuongorore iwe uyo asati atova Yelper yakasimbiswa ine huwandu hunofungidzirwa hushanu hweongororo hunowanzo kutungamira kune yavo mhinduro kuti ifefetwe. Uye, pateni yemhando nyowani yemushandisi maakaunzi akasiya wongororo dzebhizimusi rako anogona kusimudza mireza mitsvuku neyegoridhe hombe.
Tichifunga izvi mupfungwa, uye zvakare tichiona izvo Yelp yaka nyadzisa pachena gwara-vanotyora munguva yakapfuura, kudzivisa zvisina musoro mutengi-base-wide kubvunza Yelp kuongororwa kuno chengetedza zviwanikwa zvako (uye pamwe nemukurumbira wako), zvichikusunungura kuti uedze dzimwe nzira.
2. Gamuchira Zvakanyanya Zvakanakisa
Ongororo yevatengi yakaitiswa neyekudzora manejimendi chikuva GatherUp yakawana izvo zvizere 25% yeongororo yakabva kune yakasarudzika vatengi zviitiko. Iyi nhamba inoratidza zvine mutsindo kuti imwe yedzakanakisa nzira dzekukurudzira vakagadzwa veYelp vashandisi kuongorora bhizinesi rako vasina kubvunzwa ndiko kudarika zvavanotarisira panguva yebasa. Kana iwe ukaverenga kuburikidza nemhando dzakakurumbira 'Yelp wongororo, iwe uchaona maYelpers vachidetemba zviitiko zvakavasimudzira: mabharani akamhanyira kunzvimbo yekupaka kunotora chinhu chakakanganikwa, mutengesi akapa ruzivo rwechokwadi pachinzvimbo chekutengesa zvakaoma, bhizinesi iro vanozo fara tsika kuodha chero chinhu chavasati vatora.
Zvinogona kunge chiri chinhu chakareruka sekuremekedzwa kana kuwedzerwa sechinhu chikuru 'wow' chinhu icho mutengi asina kutarisira chingavaendesa kuYelp kuti vashandise yavo yemahara nguva vachizvidira kugovana mufaro wavo. Kana bhizinesi rako richida kuwedzerwa kuongororwa kweYelp, ongorora marongero ebasa revatengi uye zvirongwa kuti uone kana uchigona kushandura zvisina kujairika maitiro kuita akakunda makuru.
3. Iva Mufudzi Anogona
'Hufungi hwemombe' haisiriyo inotsanangudza inobata kumeso kune vatengi kana vaongorori, asi zvave zviri tsika yekutarisisa kwepfungwa dzevanhu kubva muzana ramakore rechi19 iro vezera rinokanganisa maitiro evanhu. Imwe nzira yakapusa yekutungamira Yelpers yakasimbiswa kuti ikusiire ongororo (isina kubvunza) ndeyekuratidza kuti vamwe vane. Idzi nzira dzinotevera dzekusimudzira kweako Yelp kuvepo kwave kuri zvakajeka kutenderwa navo:
Simbisa yako akanakisa Yelp ongororo, sekureba sekunge iwe wabvunza vaongorori 'mvumo yekuita kudaro.
Ive neshuwa unoshandisa Yelp yakabvumirwa logo mukuita kudaro, pasina kuichinja kana kuitsaudzira.
Ive shuwa iwe unoti wongororo yacho kuna Yelper akazvinyora, uye usachinje mutauro wavo kana chiyero chavo.
Unogonawo kushandisa Yelp's pachake widget kunyatsoisa mukati mekutarisa pawebhusaiti yako.
Kana bhizinesi rako richikodzera, iwe unogona kugamuchira iyo 'Vanhu Vanotida PaYelp' kunamatira hwindo.
Kumbira iyo 'Tsvaga Isu PaYelp'
Zvakafanana nekushandisa kwakatenderwa pawebhusaiti yako, unogona kusanganisira zvinofungidzirwa, zvisina kuchinjika Yelp ongororo pazvinhu zvetsika zvekudhinda. Semuenzaniso, unogona kutsvaga mvumo yaYelper yekumisikidza ongororo yavo pane-muchitoro mapepa, mabhana, mabhurocha, mapepa uye zvimwe zvinhu.
Ese matekiniki ari pamusoro anotsvaga kusimudzira ruzivo rwevashandisi veYelp kuti vamwe vari kuongorora bhizinesi. Iwe uri kufudza zvinyoro-nyoro asi zvine hunyanzvi kusvika padanho rekushandurwa kwavanofunga kusvetukira pachikwata uye nekuwedzera kwavo kuongorora.
4. Ita Yelp Nzira-mbiri Kutaurirana
Zvinogona kutyisa kutendeseka kusangana neicho chokwadi chekuti mutengi veruzhinji vari kuita hurukuro inoenderera pamusoro pechiratidzo chako pamapuratifomu makuru ekuongorora seYelp. Kutya kuongororwa chaiko uye zviri pamutemo chiitiko chemazuvano manejimendi manejimendi, asi kushushikana (uye mhedzisiro yebhizinesi) kunogona kuchinjwa zvakanyanya nekushandisa zvine hunyanzvi kwemuridzi kupindura basa mapuratifomu mazhinji anopa. Ichi chimiro chinoita kuti muridzi apindure kune zvese ongororo, uye zvakawanda zvakanyorwa pamusoro pesimba rerudzi urwu rwekutengesa kushandura zvakazara mamiriro asina kunaka. Zvishoma zvakataurwa nezve kugona kwevaridzi kupindura zvakanaka wongororo kuratidza kuratidza kuonga uye kukurudzira kumwe kubatanidzwa.
Tichifunga kuti zvakanaka Yelp ongororo ndezvokuzvidira zvemukati vatengi varikugadzira bhizinesi rako, hazvina kukodzera chete yekutenda vaongorori - iri zvakare nzira yakanakisa yekuratidza kune vamwe maYelpers kuti unoonga sei vabati vako. Muridzi webhizinesi anotora nguva yekunyora pfupi asi tsika kupindura kuratidza kuonga kwechokwadi kuri kuratidza kune vamwe vese vatengi vanogona kuti nguva yavo uye mazwi akanaka anokosheswa. Yekuvimbiswa yekutenda-kubva kubhizinesi inoshanda sekuwedzera kukurudzira kuitisa. Ndiani asingafarire kukosheswa?
Rangarirawo, kuti maElite elite anoshanda zvakanyanya paYelp - vanofarira zvakanyanya kunyora ipapo. Vatumire chiratidzo chakanaka, neako aripo muridzi mhinduro yekuvapo, kuti iwe une Yelp hobby yakafanana.
5. Verbalize It, PaUchenjeri Hwako
Iri zano rakanyanya kukodzera kumabhizinesi madiki emuno anovaka hukama chaihwo nevatengi vavo. Muchikamu chekutenga, izvi zvinogona kusanganisira zvitoro zvemabhuku, mabhizimusi ezvipfeko, zvitoro zvezvipo, zvitoro zvepurazi, grocery yakazvimirira kana zvitoro zvehardware, kana mabhizinesi anopa vanhu vakasarudzika sevanyori, vaimbi kana vatambi - kungodoma vashoma.
Kana iwe, kana wako wepamusoro-soro, vashandi vakavimbika vakagadzira hukama nevatengi venguva dzose, hapana chikonzero nei usingakwanise kutaura navo pachako nezveYelp panguva isina kukurumidza. Kana iwe ukaona kuti ivo vari vanoshingaira Yelper, hapana chekudzivirira iwe kutaurirana nezve zvazvinoita kuve muridzi webhizinesi kuyedza kushanda mukati meYelp nhungamiro yekusambobvunza zvakananga kuti uongororwe. Icho poindi cheichi hachisi chekubata manzwiro evatengi - iyo poindi ndeye kuva nenzira mbiri yekutaurirana nezve iro rakakosha basa rebhizinesi mukurumbira munharaunda yaunogovana. Chii icho mutengi wako anofunga nezve mutemo? Iwe unofungei nezvazvo? Kana mutengi akazvipira kune rako bhizinesi, hurukuro yakaita seiyi inogona kuvakurudzira kuti vaite chikamu chavo kuti vachengetedze mikova yako yakavhurika kuitira kuti varambe vachinakidzwa nezvipo zvako.
Mutemo waYelp unobva mukuzvipira kwavo kuchokwadi. Vanoda kuti ongororo dzirege kusasarura, kuti dzive nechokwadi chekuti dzinobatsira kune vese vatengi. Izvi zvinonzwisisika - hapana munhu anoda kuumba pfungwa yenhema zvichibva mukunyepedzera kana kukurudzira kuongororwa.
Vatengesi vemuno, zvakadaro, vanoziva kuti vanofanirwa kukwikwidza kuti vararame vachirarama zvinoenderana nehunhu hwavo hwekuvimbika nekutendeka. Chinyorwa ichi chakapa matipi ekuti ubatsirwe nesimba rakakura raYelp kutyaira mari nzira yekambani yako, pasina kushungurudza chikuva. Kupfuura izvi, zviri kusvika kuYelp, kune vatengi vavanoshandira, uye kumabhizinesi anotora chikamu kuti varambe vachiongorora zvinoita kuti mutemo uve wakanaka kune vese. Kufunga mapato ese mukufunga, iri hurukuro inoda kuenderera mberi.
Haisi chokwadi chiri kutaurwa nezve bhizinesi rako paYelp pakutanga? Kana kukurirwa uye kushaya kuti wotangira papi? Moz Local ichakurumidza kukubatsira kutora uye kubata yako bhizinesi Yelp kuvepo uye kupindura kune ongororo pamwe neakasimba emunharaunda ekutsvaga manejimendi maficha mukati mepuratifomu yavo.
Tanga Yako Yemahara Muedzo Nhasi!
Tags: mawere akasiyanacole Hardwaredhisikaundi vavaki vanopamainjiniya blogTsvaga Isu PaYelpUnganidzaUpGetFiveStarsutanomafungiro emombezvomunharaundabhizinesi rekugaraKuonekwa kwenzvimboyemuno kuoneka systemlowe'sKuvandudza Kumba kwaLowemozmoz yemunoRestaurantsReviewssan franciscoTripAdvisorventurebeatYelpYelp blogmutemo weelprutsigiro yelpmirayiridzo yelpyelpers
7 Zvikonzero Nei Mafomu Ekutungamira Akafa
Kukadzi 2, 2017 na10: 16 PM
Yakanaka chinyorwa, asi ini ndine mubvunzo. Unoti:
"Simbisa yako yakanaka Yelp wongororo, chero bedzi iwe wabvunza vaongorori 'mvumo yekuita kudaro."
Nei uchida mvumo kana ongororo yacho yakatumirwa pachena?
Kukadzi 4, 2017 na4: 26 PM
Ndatenda nekubvunza mubvunzo wakanaka. Icho chinodikanwa naYelp kuti iwe uite izvi, pane chimwe chezvinyorwa zvandakabatanidza kubva pachidimbu ichi. Kufungidzira kwangu ndekwekuti nzira iyo Yelp anoona nayo ndeyekuti muongorori akabvuma kuti mazwi avo abudiswe pachena paYelp uye mapuratifomu ayo Yelp inogovera - ivo havana kubvumirana kuti mazwi avo abudiswe pachena pawebsite yekambani yechitatu. Nekudaro, ndiri kungopfuura nega zvaYelp zvaari kuda pano, asi sezvandambotaura, ndinofunga pane chokwadi chiri kudikanwa chekuti Yelp irambe ichiongorora nevaridzi vebhizimusi izvo zvinoita kuti mutemo uve wakanaka. Ndinovimba izvi zvinobatsira!